လက်ကျန် သက်တမ်း သုံးနှစ်အတွင်း ဖော်ဆောင်မည့် စီမံကိန်းများကို လွှတ်တော်သို့ တင်ပြမည်ဟု ရန်?? - Yangon Media Group
လက်ကျန် သက်တမ်း သုံးနှစ်အတွင်း ဖော်ဆောင်မည့် စီမံကိန်းများကို လွှတ်တော်သို့ တင်ပြမည်ဟု ရန်??
“ကျွန်တော်တို့ တစ်နှစ်နဲ့ဆယ်လ အစိုးရဘက်က ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်မှု တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စီမံကိန်းတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးဟာ လေ့လာဆန်း စစ်မှုတွေပြီးစီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်နှစ်လကြာရင် ကျွန်တော်တို့အစိုးရ သက်တမ်းနှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အစိုးရ သစ်ရဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအချိန်ကာလဟာ သုံးနှစ်ကျန်ပါတယ်။ ဒီသုံးနှစ်စီမံကိန်းတွေကို ကျွန်တော်တို့တွေ စနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအနေဖြင့် မကြာမီကျင်းပမည့် လွှတ် တော်တွင် ခြောက်လဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲရန်ရှိပြီး ယင်းဘတ်ဂျက်နှင့်အတူ စီမံကိန်းကိုလည်း အတည်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
“မကြာခင်မှာ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ အခုလာမယ့် ကျင်းပမယ့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့က ခြောက်လဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲဖို့ရှိပါတယ်။ ဒီဘတ်ဂျက်နဲ့အတူ ဘတ်ဂျက်မှာပါဝင်တဲ့ ငွေကြေးသုံး စွဲမှုနဲ့အတူ စီမံကိန်းကိုလည်းအတည် ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကနိုင်ငံတော် ပိုက်ဆံနဲ့တည်ဆောက်မယ့် စီမံကိန်း တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော် ပိုက်ဆံနဲ့ မတည်ဆောက်တဲ့ ဘတ်ဂျက် ပြင်ပစီမံကိန်းများကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အတည်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ကျန်သုံးနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းအားလုံးကို နောက်တစ်ကြိမ်ကျင်းပမည့် (၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင်လည်း တင်ပြမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းင်းကဆက်လက် ပြောသည်။
သရက်သီး ကုန်ကြမ်း ပြတ်လပ်ချိန်ဖြစ်၍ ရန်ကုန်ဈေးကွက်သို့ တင်ပို့နေသည့် ထုပ်ပိုးပြီး အသားခဲ
ဗီရိုနာ ကွင်းလယ်လူ ကာဆာရက်စ်အား လာဇီယို အသင်းခေါ်ယူအားဖြည့်